Shiinaha Golf Xidho funaanada ragga Lab Polo Shirt Short Sleeve Shortless Polot laastik ah ragga loogu talagalay soo saarayaasha iyo alaableyda | RE-HUO
Golf Xidho funaanada ragga Lab Polo Shirt Short Sleeve Shorthal Polot laastik ah ragga
Nooca alaabta: Shaarka Polo
Waxyaabaha: 180gsm 92% caag 8% spandex
Midabka: cawl, buluug, casaan, haro buluug, guduud
Midabada keydka, MOQ-da waa 50 gogol shaati-polo ah, waxaadna dooran kartaa cabirro badan.
1.Dhammaan cabbirku waa cabbirka Shiinaha waxaana lagu cabiraa gacmo sidaa darteed waa xaalad caadi ah in la helo 1-2cm baaxad qalad Caadi ahaan ku hadalka Shiinaha cabirkiisu wuu ka yar yahay cabirka US ama EURO (cabbirka Shiinaha XL = Euro size S, cabbirka Shiinaha L = Euro size XS iyo wixii la mid ah)
2.Fadlan si taxaddar leh u hubi jaantuska cabbirka kahor intaadan iibsan shayga.
3.3.Fadlan ogow in farqiga midab yar uu yahay mid la aqbali karo iftiinka iyo shaashadda darteed.
Waxaad dooran kartaa hal ama in kabadan habab daabicis ah si aad shaarkaaga polo uga dhigto mid moodada badan.
Waxaad noo soo dirtaa nashqadaada anaguna waan u daabacaynaa sidaad codsatay, hadaadan aqoon sida loo sameeyo naqshad shaati polo ah, waxaad noo soo diri kartaa astaantaada ama fikirkaaga, oo naqshadeeyeheena ayaa kuu dhameystiri kara naqshadda.
Waxaan bixinaa calaamadeyn gaar ah iyo adeeg tag ah, sameynta shaati polo leh astaan ​​kuu gaar ah
Hore: Kooxda sublimation isboorti ee tayada ugu fiican cayaaraha kubbadda cagta dirayska kubbadda cagta oo xirta kubbadda cagta
Xiga: Fashion Breathable Sports Short Sleeve Unisex dhakhso qalalan oo funaanad daabacan polyester spandex tshirt